बिज्ञान प्रबिधि Archives - Kavre Online
नयाँ मोडेलमा आएको ३५० सिसिको बुलेटको दाम ह्वातै घट्यो, हेर्नुहोस कती मुल्य ?
काठमाडौं । बेलायती मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्डले भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यको बाइक ‘बुलेट एक्स’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । यो बाइकको किक स्टार्ट भर्सन १ लाख ४ हजार भारु र बुलेट इएस एक्स (इलेक्ट्रीक स्टार्ट) को मूल्य करिब १ लाख ९ हजार भारु हुने अनुमान गरिएको छ । रेगुलर मोडलको मूल्यभन्दा यो मूल्य ५० हजारले सस्तो हो ।बुलेट एक्स र बुलेट इएस एक्स दुई वटा भर्सनमा बिक्री वितरण हुने कम्पनीले जनाएको छ । बुलेट एक्स जेट ब्ल्याक पेन्ट कलर अप्शनसँगै, बुलेट सिल्भर, स्याप हायर ब्ल्यु र इएस एक्स रेगल रेड, रोयल ब्ल्यु र जेट ब्ल्याक कलर अप्सनमा आउने छ । कम्पनीले बुलेट एक्समा ३४६ सिसि सिंगल सिलिन्डर कार्बुरेटर इन्जिन लगाएको छ । यसले अधिकतम १९.८ हर्ष पावर र २८ एनएम पिक टर्क दिन्छ । यसको फ्रन्टमा डिस्क र रियरमा ड्रम ब्रेक लगाइएको छ भने, बाइकमा सिंगल च्यानल एबीएस, रियर ह्वील लिफ्ट अफ प्रोटेक्शनको विश
यो हो विश्वको सबै भन्दा महँगो कार, जस्ले ३ मिनेटमा १०० किलोमिटरको यात्रा तय गर्छ ! मुल्य कती ?
विश्वको सबै भन्दा महँगो कार बुगाटी भन्ने कार कम्पनिले निर्माण गरेको छ । यस बर्षको जेनेवा अटो शोमा यसलाई सबै भन्दा महँगो कार घोषणा गरिएको हो । बुगाटी कम्पनिले बनाएको नयाँ मोडलको गाडीको नाम बुगाटी ला वुएरेट नोयरू राखेका छन् । सो कारलाई बुगाटीले बनाएको पुरानो मोडल चिरोनको रुपान्तरित मोडल भनिएको छ । यो भन्दा पहिले रोल्स रोयसको स्वीप्टेल भन्ने कारलाई विश्वको सबै भन्दा महँगो कारको उपाधि दिएको थियो भने यो वर्ष बुगाटी कम्पनिले उक्त उपाधि हात पारेको छ । बुगाटी कम्पनिले आफ्नो ११० औँ वर्ष गाठको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरेको हो ।
टेलिकमले ल्यायो यस्तो गजवको अफर
डे डाटा प्याक अन्तर्गत अब १० रुपैयाँमा बिहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म एक दिनका लागि ८० एमबी डाटा चलाउन सकिने छ । डे भ्वाइस प्याक अन्तर्गत १० रुपैयाँमा बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म गरी १०० मिनेट कम्पनीकै नेटवर्कमा भ्वाइस कलनेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि आकर्षक अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । अफर अन्तर्गतको सेवा आज देखि ९० दिनसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि उपलब्ध समर अफर अन्तर्गतका प्याकेजमा केही थप सुविधासहित अटम अफर ल्याइएको टेलिकमले जनाएको छ । पहिले उपलब्ध भएका डे डाटा प्याक, डे भ्वाइस प्याक र एफटीटीएच कम्बो प्याकलाई परिमार्जन गरी अझै ग्राहकमैत्री बनाइएको टेलिकमी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।डे डाटा प्याक अन्तर्गत अब १० रुपैयाँमा बिहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म एक दिनका लागि ८० एमबी डाटा चलाउन सकिने छ । डे भ्वाइस प्याक अन्तर्गत १० रुपैयाँमा
पल्सर १२५को दमदार इन्ट्री, यस्तो छ पहिलो महिनाको बिक्री
बजाज मोटरसाइकलले भारतीय बजारमा ल्याएको पल्सर सिरिजको सबैभन्दा कान्छो बाइक ‘पल्सर १२५’ले निकै धमाकेदार बिक्रीको सुरुवात गरेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । अगस्टको अन्तिम साता बजारमा आएको उक्त मोटरसाइकलको पहिलो महिनाको बिक्री १९ हजार ८५८ यूनिट भएको जनाएका छन् । अगस्ट महिनामा समग्र पल्सर सिरिजको बिक्री ७० हजार ५६२ यूनिट भएको मा सबैभन्दा बढि पल्सर १५० बिक्री भएको जनाइएको छ । ३३ हजार २६५ यूनिट पल्सर १५० बिक्री हुँदा पल्सर १२५ दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।भारतीय अटो बजार यतिबेला निकै कमजोर भइरहेको बेलासमेत बजाज पल्सर सिरिजले आफ्नो साख बचाइरहेको छ । यस्तोमा बजाज पल्सर १२५ ले निकै राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको जनाइएको छ । यो मोटरसाइकलमा १२५ सीसी एयर कुल्ड सिंगल सिलिन्डर इन्जिन रहेको छ । पल्सर १५० मा आधारित यो मोटरसाइकल पल्सर सिरिजकै सबैभन्दा सस्तो मोडल हो ।यसमा उपलब्ध एयरकुल्ड डिटीएसआई इन्जि
Oct52019 by adminNo Comments
रातारात चमत्कार हुनको लागि सुत्नुअघि सिरानीमुनी यी पाँच चिज राख्नुस्
शास्त्र भन्छ ‘दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ ।’ रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । हनुमान चालिसा- हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, अहम र खराव सपना समेत आउँदैन । सपनाविहिन सुताइनले शरीर पुनर्जाग्रित हुन्छ । फलामको उपकरण- सुत्ने बेला सिरानी मुनी फलामको उपकरण राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । वालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण चलेको हो । मुला- सिरानी मुनी मुला राखेर सुत्
नेपाल टेलिकमले दियो १०० को रिर्चाजमा यस्तो आर्कषक अफर
काठमाडौं । समयसमयमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ नयाँ सेवा दिदैं आएको नेपाल टेलिकमले संविधान दिवसको अवसरमा पनि नयाँ अफर दिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको टेलिकमले नयाँ अफरबारे जानकारी दिएको हो । टेलिकमले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जम्मा १ सय रुपैयाँमा ३ जिबी डाटा प्याक दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त डाटा प्याक लिएर लगातार तीन दिनसम्म प्रतिदिन १ जिबीका दरले जम्मा ३ जिबी डाटा प्रयोग गर्न पाइनेछ । यो अफर असोज १ (आज) गतेदेखि १५ गतेसम्म उपभोग गर्न पाइने छ । उक्त सुविधा लिनका लागि स्टार १४१५ स्टार ३ ह्याज डायल गरि ३ डि १ जि लेखेर १४१५ मा एस्एमएस् पठाएर अथवा नेपाल टेलिकम एपमार्फत पनि उक्त लिन सकिने जानकारी दिइएको छ । यो सँगै दशैं तिहारलाई लक्षित गरेर पनि नयाँ अफरहरु ल्याउने योजना बनाइरहेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
प्यूजाे र बीवाइडीकाे इलेक्ट्रीक कारमा प्रतिस्पर्धाः देख्दा उस्तै मूल्यमा १५ लाख फरक
कम्पनी हो । प्यूजो सबै कारका कार निर्माणको लागि विश्वमा चर्चित रहेको छ भने बीवाइडी इलेक्ट्रीक सवारीसाधन र व्याट्री उत्पादनको लागि चर्चित नाम हो ।बीवाइडीका इलेक्ट्रीक कार नेपाली बजारमा साइमेक्स इन्कले बिक्री वितरण गरिरहेको छ भने प्यूजोको बिक्री वितरक साङ्ग्रिला मोटर्सले गर्दै आएको छ । प्यूजोको ‘पाटर्नर टीपी’ पाँच सिट क्षमताको गाडी हो भने बीवाइडी एम–३ मा ५ र ७ दुबै सिट अप्सन रहेको छ । विशेष गरेर धेरै मानिसको ओसार पसारमा बीवाइडीले ध्यान दिएको छ भने प्यूजोले ५ जना मानिस र धेरै लगेज बोक्न सक्नेगरि आफ्नो गाडी बनाएको छ । प्यूजोको पाटर्नर टीपीको मूल्य ६० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने बीवाइडी एम ३ को मूल्य ४५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । मूल्यका हिसावले बीवाइडीको गाडी १५ लाख रुपैयाँ सस्तो रहेको छ ।पाटर्नर टीपीमा २२.५ किलोवाट आवर क्यापासीटीको लिथियम आयन व्याट्री र ४९ किलोवाटको मोटर प्रयोग गरिएक
यामाहाको ‘एमटी१५’ आकर्षक बाइक बजारमा, मूल्य कति ?
काठमाडौं। नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले यामाहा एमटी१५, ‘द डार्क वारियर’ लाई औपचारिक रुपमा नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ एमटी१५ मा लिक्विड कुल्ड, ४ स्ट्रोक, एसओएचसी, ४ भल्भ, ६ स्पिड ट्रान्समिसन भएको १५५ सीसीको फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिन छ जसमा ‘भेरिएबल भल्भ एक्च्युएसन’ (भीभीए) र ‘असिस्ट एन्ड स्लिपर’ (ए एन्ड एस) क्लच जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि रहेको छ। ‘एमटी’को पूर्ण रुप ‘मास्टर अफ टर्क’ हो। एमटी सिरिजका यामाहा मोटरसाइकल ‘पावर’ (शक्ति) र ‘एजाइलिटी’ (फुर्तिलोपना)का लागि संसारमै लोकप्रिय छन्। हाइपर नेकेड प्लेटफर्ममा बनेको नयाँ एमटी१५मा प्रयोग भएको फयुल इन्जेक्टेड इन्जिनले १०००० आरपीएममा अधिकतम १९.३ पीएस शक्ति र ८५०० आरपीएममा अधिकतम १४.७ एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ। नयाँ एमटी१५ ‘एजाइल एसिलेरेसन’, ‘एजाइल ह्यान्डलिङ’ र ‘एड्भान्सड डिजाइन’को सबैभन्
अमेरिका । वैज्ञानिकहरुले न्युट्रोन स्टारहरु ठोक्किएको करिब दुई वर्षपछि यसबाट ठूलो मात्रामा सुन र प्लाटिनम उत्पन्न भएको पत्ता लगाएका छन् । रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले आफ्नो मासिक जर्नलमा सुन र प्लाटिनमका सयौं ग्रह उत्पन्न भएको भन्दै एक अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । सन् २०१७ मा दुई तारा ठोक्किएका थिए । सन् २०१६ मा पनि यस्तै घटना भएको थियो । त्यसैले यस घटनामा उनीहरुले विशेष ध्यान दिए । यसबाट दुई सूक्ष्म तारा ठोक्किएर विलय भएर किलोनेभा उत्पन्न भएको उनीहरुले बताए । ठूला तारा विस्फोट भएपछि अथवा टुक्रिएपछि ताराको बचेको अवशेषलाई न्युट्रोन स्टार अथवा सूक्ष्म तारा भनिन्छ । न्यूट्रोन स्टार ब्ल्याक होलमा मिले पनि किलोनोभाको निर्माण हुन्छ । सन् २०१६ र २०१७ भएको न्युट्रोन स्टारको टकराबले ठूलो मात्रामा सुन र प्लाटिनम उत्पन्न भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सुनको यो भण्डार ग्यालेक्सी एनजीसी ४९९४ मा
कसले किन्यो ‘अटो सो’मा राखिएको ७४ लाखको बाइक ?
नाडा अटो सो’मा राखिएको सबैभन्दा महँगो बाइक बिक्री भएको छ । एमभी अगस्टाको लागि नेपालमा आधिकारीक वितरक भेलोसिटी प्राइभेट लिमिटेडले ‘नाडा अटो सो २०१९’मा सार्वजनिक गरेको ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको बाइक बिक्री भएको हो । भदौ १० गतेदेखि भृकुटीमन्डपमा चलिरहेको ‘अटो सोे ’मा रहेको सबैभन्दा महंगो बाइक रुपमा रहेको ब्रुटाले ८०० आर–आर एलएच ४४ को बाइक बिक्रीका लागि बुकिङ भएको हो कम्पनीका अनुसार बाइक किन्ने काठमाडौंकै भएको बताइएको छ । तर नाम उल्लेख भने गरिएको छैन । बाइक बुकिङ गर्ने मान्छेले २० प्रतिशत रकम कम्पनीलाई बुझाइसेकेका छन् । यसै हप्ता कम्पनीले उक्त बाइक ती व्यक्तिलाई दिँदै छ । कम्पनीले अटो सोमा सार्वजनिक गरेको यो बाइक संसारभर मात्रै १ सय ४४ युनिटमात्र उत्पादन गरिएको छ । यो मोटरसाइकल दक्षिण एसियामा नै एक युनिट मात्रै आएको थियो । सोही बाइक ‘अटो सो’मा राखिएको थियो । फर्मुला १ च्याम्पीयन
जापानको संसद बैठकमा ३ मिनेट ढिला पुग्दा मन्त्रीले… (1,085)